कोभिड–१९ रोकथाममा खटिएका चिकित्सक भन्छन्– हामी आफैं चनाखो छौं, किन डराउने ? : RajdhaniDaily.com -
Home Breaking News कोभिड–१९ रोकथाममा खटिएका चिकित्सक भन्छन्– हामी आफैं चनाखो छौं, किन डराउने ?
काठमाडौं । कोभिड–१९ रोकथाममा सक्रिय चिकित्सकले आफू सचेत हुँदै संक्रमितको उपचारमा खटिएको बताएका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले आफूहरू सतर्क रहेर उपचारमा खटिएको बताए । उनले भने, ‘हामी आफैं चनाखो छौं । सर्जिकल मास्क लगाएर काम गरिरहेका छौं ।’
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि फ्रन्ट लाइनमा खटिएका टेकु अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले आफूले शारीरिक दूरी कायम गरेको बताए । उनले भने, ‘मैले शारीरिक दूरी कायम गर्दै आएको छु । बुबाआमा र परीवारका सदस्यबाट टाढा बस्छु । यो कहिलेसम्म हो, अझै भन्न सकिँदैन ।’
लकडाउन प्रभावकारी भएकै कारण समुदायमा संक्रमण फैलिन नपाएको डा. बास्तोलाको भनाइ छ । टेकु अस्पतालमा खटिएका चिकित्सकहरू बिरामीमा देखिएका लक्षणको आधारमा उपचार प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको बताउँछन् । कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट देखिए एन्टिफ्लु, एजी थ्रोमाइसिन, पारासिटामोललगायत औषधि चलाइएको छ ।
टेकु अस्पतालमा आइसोलेसनमा उपचाररत संक्रमित र सम्भावित संक्रमितका लागि फोन, वाइफाइ र खानाको व्यवस्था गरिएको छ । थप २० वटा आइसीयू बेड जडान गरिएको र ती केही दिनमै सञ्चालनमा आउने टेकु अस्पतालले जनाएको छ । संक्रमितको संख्या बढे उपचारमा खटिने चिकित्सकको अभाव नभएको टेकु अस्पतालको भनाइ छ ।
उच्च जोखिम रहेका स्थानमा सरकारले विशेष निगरानी गर्नुपर्ने विषयमा चिकित्सकको जोड छ । ती क्षेत्रमा संक्रमण दर फैलिन नदिन स्थानीय समुदायमा परीक्षणको दायरा फैल्याउन सुझाव दिएका छन् । नाकाबाट आएका सबैको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ ।
उच्च जोखिम रहेका स्थानमा जनचेतना प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । ‘क्लोज कन्ट्याक्ट’मा नबस्दा पनि नेपालमा संक्रमण दर नफैलिएको हुन सक्ने सरुवा रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । अन्य देशमा चुम्बन खाने, नजिक बस्ने र अंकमाल गर्ने चलन भए पनि नेपालमा त्यस्तो छैन । टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. भण्डारी कडाउन एकैपटक खुला गर्न नहुने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘लकडाउन आंशिक रूपमा खोल्दै जानुपर्छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ ।’ जोखिम नभएका ठाउँहरू खुला गरे पनि मुख्यतः भारतबाट भित्रिने ठाउँमा कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५८ पुगेको छ । बुधबार बाराका ३१ र ४३ वर्षका पुरुष तथा पर्साका ४६ वर्षीया पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या ५७ पुगेको हो ।
संक्रमितमध्ये १६ जना भने उपचार पछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् । बाँकी ४१ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । हालसम्म पीसीआर विधिबाट ११ हजार ५ सय २४ वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ ।
कोरोनाको आशंकामा हाल मुलुकभर ८७ जना आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन् । जसमध्ये ४ काठमाडौं उपत्यकाभित्र र ८३ जना बाहिरका छन् ।
सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता नभएको भनेर सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टीकाटिप्पणी अब संसदीय समितिमा नै बहस हुन थालेपछि विषय निकै गम्भीर बन्न पुगेको छ । कोरोना...
बागलुङ । कोरोना भाईरस संक्रमण आशंकामा बागलुङबाट पहिलो पटक नमुना परीक्षणको लागि पठाइएको ‘स्वाब’को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । भाईरस संक्रमण आशंकामा धौलागिरी...
Exclusive Sushila Bishwokarma - December 31, 2020 0
इटहरी । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ३ का पर्शुराम भट्टराईको हत्या भएको भन्दै पीडित परिवारले इटहरीस्थित नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना गेट अगाडि धर्ना...
भर्खरै Kumar Raut - October 28, 2020 0
Breaking News Kumar Raut - December 25, 2020 0
Exclusive Kumar Raut - November 19, 2020 0